>lọ>ngwaahịa>Ihe mgbochi>Bipute n'okwu
Emkpụrụ Mkpụrụ Mkpụrụ Mkpụrụ White Na-acha ọcha - Flokpụrụ Ifuru Ifuru & Nchebe Nzuzo 8348 mbipụta sheer
Kacha nta Order ibu: 300pcs
Ahịa: USD2-5 / TET
Tụkwasịnụ Ikike: 300000-350000pcs / ọnwa
Ihe ngebichi ndị a nwere ike ịnye ọhụụ mara mma nke oge a, nke na-enyeghị ihe nzuzo kamakwa na-eme ka ìhè dị nro nke anyanwụ jiri nwayọ banye n'ime ụlọ, ihe ndozi zuru oke maka ụlọ, ụlọ oriri na ọ andụ hotelsụ na ụlọ oriri na ọ etc.ụ ,ụ, wdg. ọtụtụ arụmọrụ zuru oke maka ime ụlọ ọ bụla.
100% aha ọhụrụ
Igwe na-asacha oyi, usoro dị nro, na iche iche. Emela ihe ịcha ọcha. Katuo kpọrọ nkụ Low, Wepu ozugbo, Emela Iron.
AKWREKWỌ AKW :KWỌ: 100% Akwa Ogo Polyester. Onu ogugu zuru oke nke udiri ihe eji enye onyinye. Na-ele anya mara mma ma mara mma, ha bụ ihe ngebichi na-enweghị isi, naanị ihe ị chọrọ.Fashion Curtains-very soft and environment friendly which with a natural flow to them - not at all stiff. Ọmarịcha akwa.
ogo kachasị elu na nnukwu ọrụ ndị ahịa. Ngwaahịa anyị nwere ogo ogo dị elu yana afọ ojuju ndị ahịa 100%
Polyster sofa mkpuchi
HF29016 isi awọ na-ese ihe eji achọ mma